Ireo tantara sangany tato amin’ny Global Voices niresahana ny fahamaroam-piainana, raha eo am-pankalazàna ny Andro Erantany ho an’ny Tontolo Iainana izao ny planeta · Global Voices teny Malagasy
Fantina avy amin'ireo tantara tsara indrindra
Voadika ny 06 Jona 2021 6:16 GMT
Zanaka fano valozoro vao foy tao amin'ny Back Bay, Tobago, 2010, handeha hamonjy ny ranomasina. Sary an'i Ryan P. Mannette, tolotra am-pitiavana avy amin'ny SpeSeas, fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny 5 Jona no manamarika ny Andro Erantany ho an'ny Tontolo Iainana, andro nosafidian'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1972 ho fanairana ny sain'izao tontolo izao momba ny maha-iankinan'ny aina ny tontolo iainana.
Nandritra ny taona marobe, tena nanao tatitra betsaka momba ny olan'ny tontolo iainana ny Global Voices, ary iray amin'ireo nifantohan'ny tantara tato aminay ny resaka fahamaroam-piainana (biodiversity), tondro iray tena fototry ny maha-iray tsy mivaky ny tontolo. Ny toerana misy ny fahamaroam-piainana ao anatin'ny rohivoahary (ecosystem) no fandrefesana ny fahasalamany, ary ny fihenan'ny fahamaroam-piainana dia fanairana miampita amin'ny tokony hilàn'ny fiarahamonina mandray fepetra mba hialàna amin'ny hamaroana tafahoatran'ny mponina, ny fitrandrahana tafahoatra ary ireo singa marobe hafa mitondra fiovàn'ny toetrandro.
Maro amin'ireo tantara ato amin'ny Global Voices no manasongadina ny lanja mavesatry ny fahamaroam-piainana sy ireo fanamby ary zavabita marobe vita mifandraika amin'ireny ezaka ireny nanerana izao tontolo izao. Hatreto, ireto ny vitsivitsy izay nahasarika indrindra ny saina tamin'ity taona ity:
Manana 69 karazana tantely i Jamaika izay tena loharanombola ho an'ireo mponina ao amin'ilay nosy. Ireo Jamaikàna mpikatroka mpiaro tantely dia manao fanentanana koa mba hametrahana habaka maitso maromaro kokoa ao Kingston renivohitra, ho fanampiana hampitomboana ny fahamaroam-piainana ao anatin'ny firenena iray izay tena tandindonindoza amin'ny fiovàn'ny toetrandro.
Ho fanomezana voninahitra ny Andro Erantany ho an'ny Fano, fantaro ireo karazany dimy mipetraka ao Trinidad & Tobago (amin'ny fiteny anglisy)
Na malemy na mafy lamosina, ireo fano (sokatra) ao dia andry iray ianteheran'ny sehatry ny zahavoary (ecotourism) ary mandray anjara amin'ny fahamaroam-piainana. Saingy tandindonindoza daholo izy rehetra amin'ny lafiny iray – hazaina noho ny henany, ny atodiny ary ny lamosiny, no sady tena marefo manoloana ireo fako plastika sy ny fiovàn'ny toetrandro.
‘Tohano ny mpiompy tantely any aminareo': ireo olana ao Karaiba, Andro Erantany ho an'ny Tantely
Ny 20 May no Andro Erantany ho an'ny Tantely. Miha-tandindonindoza mandrakariva noho ny fampiharana fambolena voly tokana sy ny fanafody simika famonoana bibikely ny tontolo voajanahary onenan'ny tantely, nefa raha tsy afaka hanatontosa ny andraikitra maha-mpitatitra vovobony azy izy ireo, tsy ho azo antoka ny fahazoana sakafo. Mametraka fanamby ihany koa amin'ny fitohizan'ny fahaveloman'ny tantely ny fisian'ilay valanaretina, satria mety hànana fahasahiranana ireo mpiompy miaina anaty fihibohana, tsy afaka mivoaka noho ny fisian'ny fanomezandàlana manokana ho afaka mivezivezy amin'ny alina mba hanao ny fitsaboana ny tohotra, izay matetika dia ny alina no fanaovana azy.
Ao Nepal, ny fisian'ilay sakadia fantatra amin'ny anarana hoe “sakadia mpanjono” dia milaza fa tena mitàna anjara toerana goavana amin'ny fitazonana ny fahasalaman'ny rohivoahary tokoa ny faritra mando. Saingy tandindonindoza ankehitriny ny fifandrohizana manontolon'ny rohivoahary any anatin'ireo faritra mando ao Nepal noho ny fandotoana, ny fandritana ary ny fanjonoana tafahoatra, hatramin'ny fihazàna ireo sakadia mpanjono aza.
Mitombo ny isan'ny Rhino any Nepal noho ny fiarahamiasa, ny fiarovana ary ny vondrom-piarahamonina (amin'ny fiteny anglisy)
Vaovao mahavelom-panantenana avy any Nepala, noho ny hetsika iadiana amin'ny fihazàna sy ireo fepetra momba ny zahavoary, nitombo be ny isan'ireo Rhinos any an-toerana.
Fampifandraisana teboka: Fandaharanasa ‘Motus’ mampiasa teknolojia mba hanarahana ny dian'ireo vorona mpifandramonina ao Karaiba (amin'ny fiteny anglisy)
Azo hamafisina amin'ny alàlan'ny teknolojia ny fiarovana / fitahirizana ny biby: izany no hevitra ao ambadiky ny tetikasa Motus izay mampiasa ny fanarahamaso avy lavitra sy mibaiko tena ny fifindramonin'ireo vorona, ramanavy ary bibikely.
Ao Kamerona, tsy faritra misy fahamaroam-piainana fotsiny ny ala, fa koa toerana masina ho an'ireo rajako ary toerana fandevenana ho an'ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana. Noho io antony io, msy fiantraikany goavana, na ho an'ny olombelona, na ho an'ireo biby any amin'ireny faritra ireny, ireo tetikasa fikapàna ala.